I-Delta Air Lines: Ubhukisho olutsha lwamazwe ngamazwe lunyuke ngeepesenti ezingama-450
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Delta Air Lines: Ubhukisho olutsha lwamazwe ngamazwe lunyuke ngeepesenti ezingama-450
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
U-Ed Bastian, i-CEO yeDelta Air Lines
Ukuvulwa kwakhona kwe-US kunempembelelo entle kubathengi kumazwe angama-33 kwihlabathi liphela, kunye neDelta ekhonza i-10 yezi zinto zingapheliyo kwaye ngaphezulu ngee-hubs zayo zehlabathi ngokunxibelelene namaqabane ayo.
I-Delta Air Lines ibone ukonyuka kwe-450% kubhukisho lwamazwe ngamazwe xa kuthelekiswa neeveki ezintandathu phambi kwesibhengezo sokuvula kwakhona kwe-US.
Iinqwelomoya ezininzi zamazwe ngamazwe kulindeleke ukuba zisebenze i-100% epheleleyo ngoMvulo we-8 kaNovemba, kunye nomthamo ophezulu wabakhweli kwiiveki ezilandelayo.
Imfuno eyomeleleyo ibonakaliswa kubo bonke abakhenkethi bezolonwabo kunye nabashishina ukuya kwiindawo ezidumileyo ezinjengeNew York, Atlanta, Los Angeles, Boston kunye neOrlando.
Kwiiveki ezintandathu ukususela oko kuvulwe kwakhona kwe-US, i-Delta ibone ukonyuka kwe-450% kwiindawo ezithengiswayo kumazwe ngamazwe xa kuthelekiswa neeveki ezintandathu ngaphambi kwesibhengezo. Iinqwelomoya ezininzi zamazwe ngamazwe kulindeleke ukuba zisebenze i-100% epheleleyo ngoMvulo we-8 kaNovemba, kunye nomthamo ophezulu wabakhweli kwiiveki ezilandelayo.
Ukuvulwa kwakhona kunempembelelo entle kubathengi kumazwe angama-33 kwihlabathi liphela, kunye neDelta ekhonza i-10 yezi zinto zingayekiyo nangaphezulu ngee-hubs zayo zehlabathi ngokunxibelelene namaqabane ayo, kubandakanya. Air France, i-KLM kunye ne-Virgin Atlantic. Imfuno eyomeleleyo ibonakaliswa kubo bonke abakhenkethi bezolonwabo kunye nabashishina ukuya kwiindawo ezidumileyo ezinjengeNew York, Atlanta, Los Angeles, Boston kunye neOrlando. Lilonke, inqwelomoya iya kuqhuba iinqwelomoya ezili-139 ukusuka kwiindawo ezingama-55 kumazwe angama-38 ezifika e-US nge-8 kaNovemba, zibonelela ngezihlalo ezingaphezu kwama-25,000.
“Esi sisiqalo sexesha elitsha lokuhamba kunye nabantu abaninzi kwihlabathi liphela abangakwaziyo ukubona abantu ababathandayo phantse iminyaka emibini,” utshilo. Ed Bastian, CEO Delta.
“Ngelixa siye sabona amazwe amaninzi ephinda evula imida yawo kubakhenkethi baseMelika ehlotyeni, abathengi bethu bamazwe aphesheya abakwazanga ukubhabha nathi okanye ukutyelela e-US Lonke olo tshintsho ngoku. Siyabulela kurhulumente wase-US ngokususa izithintelo zokuhamba kwaye sijonge phambili ekuhlanganiseni iintsapho, abahlobo kunye noogxa bethu kwezi ntsuku neeveki zizayo. ”
I-Flight DL106 esuka eSao Paulo isiya eAtlanta iya kuba yindiza yokuqala yeDelta yamazwe ngamazwe ukuba ifike e-US phantsi kwemithetho emitsha ngoMvulo ngo-09:35 kunye neninzi ngokusondeleyo ngasemva.
Njengokuzithemba komthengi kwiimbuyekezo zokuhamba, Delta Air Lines inyusa iinqwelomoya kobu busika zisuka kwizixeko eziphambili zaseYurophu eziquka iLondon-Boston, iDetroit neNew York-JFK, iAmsterdam-Boston, iDublin-New York-JFK, iFrankfurt-New York-JFK neMunich-Atlanta.
I-Atlanta, isikhululo seenqwelomoya sedolophu yaseDelta, isesona sikhululo sayo sixakekileyo samazwe ngamazwe kunye nokuhamba kwemihla ngemihla okungama-56 ukuya kumazwe angama-39. Ilandelwa sesona sixeko sase-US esityelelwe kakhulu, i-New York-JFK, esinohambo lwemihla ngemihla lwe-28 ukuya kwizixeko ezingama-21 zamazwe ngamazwe.
Ukuvulwa kwakhona okubalulekileyo kunika ukomelela kuqoqosho lwehlabathi ngelixa ngaxeshanye kuphawula ukuqala kokubuyiswa kweshishini lamazwe ngamazwe leDelta. I-airline ibike ngeli hlotyeni ukuba ishishini layo lezolonwabo lasekhaya lase-US sele libuyele kumanqanaba ka-2019, kodwa izithintelo eziqhubekayo zemida zithintele ukuchacha okunentsingiselo kwihlabathi liphela. Uhambo lwamazwe ngamazwe oluya e-US lube negalelo leebhiliyoni ezingama-234 zeedola kwingeniso yokuthumela ngaphandle kuqoqosho lwase-US, luvelise intsalela yorhwebo oluzibhiliyoni ezingama-51 zeedola kwaye lwaxhasa ngokuthe ngqo imisebenzi ezizigidi ezisisi-1.2 saseMelika ngo-2019.
Abemi bamazwe angaphandle baya kuvunyelwa ukuba bangene e-US kunye nobungqina bogonyo kunye novavanyo olubi lwe-COVID-19 oluthathwe kwiintsuku ezintathu zokunduluka. Abantu bamazwe angaphandle abangagonywanga banokungena e-US kuphela ukuba bayayifezekisa imiqathango yokuthintela okulinganiselweyo kwaye bazibophelele kuvavanyo lwasemva kokufika, ukuvalelwa bodwa kunye nogonyo. Abathengi kufuneka babonelele ngeenkcukacha ukuhlangabezana neemfuno zomkhondo woqhagamshelwano wase-US.
Bonke abathengi aba-2 nangaphezulu kufuneka banxibe isigqubuthelo sobuso kulo lonke uhambo, ngelixa ucoceko oluphuculweyo lweDelta luhlala lukhona. Oku kubandakanya ukucocwa rhoqo kunye nokucocwa kweendawo ezinomgangatho ophezulu wenqwelomoya kunye nakwizikhululo zeenqwelomoya, kunye nokutshizwa nge-electrostatic kwendawo yangaphakathi yenqwelomoya ngesibulali-ntsholongwane somgangatho ophezulu ukuqinisekisa ukuba akukho ndawo ingabonwayo.